Ra’iisal-wasaaraha Israa’iil oo Dirqi ugu guulaystay doorashada 2020, Caqabado haysta & Maxkamad ku Socota | Aftahan News
Ra’iisal-wasaaraha Israa’iil oo Dirqi ugu guulaystay doorashada 2020, Caqabado haysta & Maxkamad ku Socota
Tel aviv (aftahannews):- Ra’iisul-wasaaraha Srael Benjamin Netanyahu, ayaa ku guuleystay doorashadii Isniinta ka dhacday Israel, oo ahayd tii saddexaad muddo sanad gudihiis ah, isaga oo wakhtigan waajahaya Maxkamadeyn musuq-maasuq iyo wax-is-daba-marin lagu eedeeyey la xidhiidha.
Ra’iisul-wasaaraha Sra’el Benjamin Netanyahu oo Mar kale ku Guulaystay Doorashada Sra’el 2020
Guushan, ayaa Netanyahu u oggolaaneysa inuu soo dhiso dowladda cusub, soona afjaro sanad is-marin waa siyaasadeed ah, kadib markii doorashooyin dhacay April iyo September 2019 lagu kala adkaan waayey.
Xisbiga sida weyn ula loolamayey Likud ee Blue and White ayaa la filayaa inuu helo 32 kursi. Marka lagu daro xisbiyada siyaasadda bidixda-dhexe, iyo kuwa isbhayasiga Carabta ee Arab Joint List, xisbiyada kasoo horjeeda Netanyahu ayaa la filayaa inay helaan 54 ilaa 55 kursi.
Inkasta oo weli aysan jirin wax damaanad oo ah in Netanyahu uu soo dhisi doono dowladda cusub, haddana wuxuu doorashadii Isniinta ku sheegay “guul” weyn. Netanyahu ayaa ku ololeeyey mowqifkiisa adag ee ku wajahan Falastiiniyiinta iyo inuu ballaarin doono deegaananda Yahuudda ee Daanta Galbeed.
Hogaamiyaha xisbiga Blue and White, ahna madaxii hore ee militariga Benny Gantz ayaa qirtay “inuu ka niyad jabay” natiijada. Hase yeeshee waxa uu carabka ku adkeeyey, in wixii ay noqotaba natiijada kama dambeysta ah, Netanyahu uu weli maxkamad kori doono 17-ka March.